[14 / 01 / 2020] Haydarpaşa iyo Saldhigga Sirkeci way diideen joojinta	34 Istanbul
[14 / 01 / 2020] IMM SözcüBeen u sheegashada Mitirka Mitirka Murat Turhan	34 Istanbul
[14 / 01 / 2020] Burbur tareen oo ka dhacay Poland	48 Poland
[14 / 01 / 2020] Gawaarida Guryaha iyo Maraakiibta ayaa lagu daray Wadooyinka Tareenka ee Iran	98 Iran
[14 / 01 / 2020] 200 Milyan oo Rakaab ah ayaa ku rarnaa Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli	41 Kocaeli
Maalinta: Ogast 22, 2019
TCDD 2, 4, 6 iyo 7 Agaasimeyaasha Gobollada ee 1924 Mashiinka Mashiinka Xirmooyinka iyo 7790 Aluminothermite Rail Welds wadarta 9714 tareenka welds. TC [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare ee Shinkansen ee Japan
Waxay soo baxday in tareen xawaare sare leh oo ku dhawaad ​​rakaabka 340 ee Japan uu albaabku u furmo in yar halka masaafada 280 ay dhaqaaqdo saacad. Wadada tareenka ee bariga Japan ayaa sheegaysa in wakaalada Kyodo ay soo warinayso [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare ee Istanbul Konya
Qadka tareenka xawaaraha-dheer ee Istanbul-Konya waa xariiq laba-laab ah, koronto, astaan ​​u leh YHT kaasoo ka bilowda Istanbul wuxuuna ka baxaa Ankara-Istanbul tareenka xawaaraha sare ee Polatlı. 2013 madax banaan oo ah khadadka Ankara-Konya iyo Ankara-Eskişehir kuwaas oo u furan hawlgal [More ...]
Gargaarka Gaadiidka Magaaladda Antalya ee loogu talagalay Dadka Naafada ah ayaa wali socda
Gawaarida Naafada ah ee Xarunta Adeegga Naafada ee Antalya ee Magaalaweynta Naafada Naafada ah waxay sii wadaa inay ka taageerto dadka naafada ah xagga gaadiidka. Muwaadiniinta naafada ah waxaa lagu qaadaa lacag la’aan, gaar ahaan isbitaalada iyo xarumaha dowladda. baabuurta, [More ...]
Cusmaan Kavuncu Boulevard Renovating
Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri waxay sii wadaysaa inay dayactir ku sameyso wadooyinka xiran awgood ciriiriga taraafikada awgood. Macnaha guud, shaqooyinka rajada laga qabo ee Osman Kavuncu Boulevard waxaa la qabtaa habeenkii si aysan saameyn ugu yeelan taraafikada. Dowladda Hoose ee Magaalada, waa magaalada ugu muhiimsan [More ...]
Birta Balustrades rinjiga Turquoise iyo White ee Kocaeli
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, iyadoo la fulinayo shaqooyinka dhaqan-xumada leh ee keenaya raaxada howlaha dhexgalka ee qaybo ka mid ah dhismayaashaas oo waqtigoodii sii xumaaday. Macnaha guud, isgoyska, oo Dowlada Hoose ee Magaalada keentay magaalada, ayaa soo daatay, [More ...]
Gawaarida taraafikada ka sokow, Kocaeli Magaalo-weynaha Magaalada, oo siisa dariiqa ugufiican ee lugeeyayaashu horay ugu socdaan, waxay sii wadeysaa dadaalkeeda ah inay magaalada soo geliso marinnada lugeynaya ee cusub. Çetin Emeç Üst oo ku yaal İzmit Yenidoğan Neighborhood [More ...]
IETT ayaa ku dhawaaqday ”24 saacad walba habeynteeda barta Twitterkeeda ee üzerine markay codsato rakaabku yap. ETT ayaa bayaan rasmi ah ku soo dhigtay barta Twitterka ee duulimaadyada habeenkii. Bayaanka, '24 saac markii la weydiisto rakaabka [More ...]
Goorma buu Ada Expresi gaari doonaa Xarunta tareenka ee Haydarpaşa
Ka dib ku dhawaad ​​7 sano, Ada Train ayaa duulimaadyadeedii bilaabay mar kale bishii Maajo mana gaari karin joogitaankeedii ugu dambeeyay Haydarpaşa. Cusboonaysiinta waxay ka shaqeysaa Xarunta Tareenka ee Haydarpaşa waxay sii socon doontaa ilaa 3 bilood. [More ...]
TCDD waxay ku degdegi doontaa guryaha qaar aan la noolaan karin ee Gaziantep iyo Kahramanmaraş
qaar ka mid ah hantida guurtada in la wareegeen TCDD ee Gaziantep iyo Gaziantep rush iyo Republic of Turkey in Kahramanmaras qaar ka mid ah dhab ah Agaasinka Guud ee Maamulka Waddooyinka Tareennada State (TCDD) ayaa go'aan ka wareegidda cawdu ka. Go'aanka Madaxweynaha ee mowduuca, [More ...]
Toddobaadka Dhaqdhaqaaqa Reer Yurub ee 2019 Sannadka Isbarashada
Guddiga Local Dowladda Policy taladoodu hoos Madaxweynaha, Midowga Yurub (EU) Wafdi Turkiga iyo Turkey iskaashiga Association of Degmooyinka (TBB) Dhaqaajin Isbuuca Yurub waxaa marti Ololaha Daahfurka shirka 2019 21 Year ee August [More ...]
Haydarpaşa iyo Saldhigga Sirkeci way diideen joojinta